UKhisimusi yiholide elijabulisayo, elijabulisayo, elifanekisela ukuzalwa kukaJesu Kristu, umsindisi wabo bonke amakholwa. Lo mcimbi ugubha ama-Orthodox, amaKatolika namaProthestani. Futhi bayamlungiselela ngaso sonke isikhathi injabulo, ukufudumala, ukufaka yonke imininingwane ngomphefumulo omncane. Ukuhlobisa indlu futhi njengezipho ezihlotsheni zethu, sinikeza ukwenza izandla zeKhisimusi ngezandla zethu - kuhle, kumnandi futhi kufanekisela.
Izimpawu zesiKhisimusi zakudala
Kulo liholide kuyisiko ukuhlobisa indlu yakho, ukulenga izingongolo eminyango noma ukuhlobisa itafula nabo. Futhi, izimpawu zikaKhisimusi yizingelosi, ikakhulukazi ezimhlophe, amabellane, amasokisi wesipho, izinkanyezi. Futhi liphi iholidi elingenalo amakhadi. Ukwakha izandla zeKhisimusi ezingavamile ngezandla zakho, akudingekile ukuthenga izinto ezibiza kakhulu esitolo, kwanele ukusebenzisa lokho okusemakhaya.
Indlela Yokwenza Ingelosi KaKhisimusi
Ingelosi ibonisa ukuhlanzeka, uhlobo lomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nendoda. Ngokujwayelekile kuboniswe izingubo ezimhlophe futhi ngamaphiko emva kwabo. Yiqiniso, manje ingelosi yeKhisimusi (yezandla) ingaba nezingubo zegolide, nezesiliva, nezingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka - konke kuxhomeke kulokho ofuna ukukusebenzisa. Sinikeza indlela elula yokwenza ingelosi yokugcoba - ukuyiphatha epulazini elilahla iphepha.
Ukwenza lokhu, udinga le nto emhlophe, okuyinto yokuqala yokunqamula imigqa, bese inqunywa eceleni kwabo. Ngaphambi kokubeka ingubo yesikhumba, izithombe zifakwe kuso, zihlotshele ukunambitheka kwakho, udwebe izici zobuso. Khona-ke ngokucophelela ukuze uphendule ipuleti, uphakamise isiqu namaphiko. Kuhle futhi kulula ukudala i-athikili ilungile.
Yiqiniso, ingelosi ingakhonjwa, ikhonjiswe kusuka kwendwangu, itshalwe ngesigxobo esiqinile esimabhodleleni noma ebhodleleni lepulasitiki, elihlanganiswe namaphini wephepha noma iphepha elimhlophe. Ukuhlobisa noma yiziphi izinto ezifanelekayo ezifanelekayo: izinhlobonhlobo - izinkinobho, izinwele - izintambo ezinomsoco zoboya, okwenziwe i-suit - isambatho esimhlophe, i-tulle noma i-organza.
Indlela yokwenza uphawu lweKhisimusi - inkanyezi
Ukwenza i-asterisk ngaphansi kokuphoqa kokubili okukhulu, futhi okuncane. Izingane zingakwazi ukusika amakhadibhodi ezinemibala noma uphawu olumhlophe lwephepha le-pentagonal, ulidwebe ngokuqonda kwakho. Isibonelo, isisekelo sombala obomvu sizoba nguSanta. Ekhoneni elilodwa udinga ukunamathela ubuso ngezinwele, amehlo nomlomo, phakathi - ibhande, ezandleni zakho - amagilavu, nasezinyaweni zakho. Leli khadi leposi elihle linganikezwa kubangani noma lifakwe esihlahleni sikaKhisimusi.
Ukubukeka kahle kakhulu kwenkanyezi kaKhisimusi, ekhaya likhishwe ngendwangu. Ngalokhu izingane azikwazi ukubhekana nazo, zizodinga usizo lwabazali bazo. Khetha indwangu yombala oyithandayo, unqume izinkanyezi ezimbili, uzihlanganise ubuso nobuso bese ugoqa nxazonke kumshini wokubhala. Shiya igebe elincane, okudingayo ukuthi uphendule umshini wobuciko uphinde ugcwalise nge-filler: uboya bekotini, i-raber i-foam, izintambo, izingcezu ezincane zendwangu - ukuthi kuyoba khona ekhaya. Umgodi ungafakwa ngesigxobo esifihliwe, ungadonsa i-loop bese ubeka umhlobiso lapha noma utshale inkanyezi ngethiphu olunzima bese uyibeka phezulu esihlahleni. Ukuhlobisa "umcibisholo" kungaba nganoma iyiphi indlela: thunga izinkinobho, iphethini yobuhlalu, izibambo ze-satin.
Isipho Classic for iholidi - ikhadi
Nakuba manje esitolo ungathenga amakhadi kunoma yiliphi iholide, umkhosi wesigubhu kanye nomunye umcimbi, kanye namakhadi womuntu siqu kanye nezinkanyezi, kumnandi ngokwengeziwe ukuthola ikhadi lesipho elenziwe ngezandla zakho, ngoba libonisa ukuzimela komuntu ngamunye nomuntu okubhekiswe kuso isipho. Ukwakha ikhadi likaKhisimusi, udinga amakhadibhodi aqinile, i-glue, izikhali, iphepha elimibala noma indwangu.
Isikhala sokucabanga asipheli, kodwa uKhisimusi sidinga isihloko esiyingqayizivele: izithombe zezihlahla zikaKhisimusi, amaSanta Clauses noma izimfanelo zawo (i-cap noma amabhuzu abomvu, ithimba lezintambo, imihlobiso yeKhisimusi), amaswidi nezinye amaswidi. Ngxenyeni elihlanganisiwe lwekhadibhodi unamathisele izithombe ezikhethiwe, sebenzisa imibhalo yokuhalalisela - nekhadi lokuposa, elidalwa ngayo yonke inhliziyo yami, lilungele. Ngaphezu kwalokho, ngisho nezingane zingakwazi ukubhekana nalesi sakhiwo.
Imiklamo yeKhisimusi eyenziwe ngendwangu
Indwangu yinto ethandwa kakhulu ekukhiqizeni izihloko ezenziwe ngesandla. Kusuka kuwo ungadonsa ama-pads, izinkanyezi, imihlobiso yeKhisimusi, amabhuzu ngezipho nokunye okuningi. Izinto ezivame kakhulu ukudala izimpawu zikaKhisimusi zizwa. It is soft, mnandi kuya touch, efudumele ukubukeka futhi kulula ukusingatha. Kusuka ekuzizwa ungadonsa isigqoko esigcwele sikaKhisimusi, futhi unqume indwangu ngemininingwane yamaphostakhadi. Imihlobiso encane yeKhisimusi yenziwa ngebhola, izinhliziyo, izilwane ezihlukahlukene (kulokhu zihlanganiswe amehlo), i-snowmen, amakhukhi nezinye izimpawu zeholide lasebusika. Phakathi nokwakhiwa kwezihloko ezizizwayo, akudingekile ukufihla umcengezi, ungenza izigxiko zangaphandle ezihle, ezizobukeka njengento yokuhlobisa.
Inqubo yokudala i-spruce wreath
Isici esibaluleke kakhulu seKhisimusi yamaKatolika, esivela cishe cishe kunoma yiliphi ikhaya, ingumuthi we-spruce noma amagatsha ephayini. Uboshelwe emnyango noma ugqoke etafuleni njengomhlobiso. Isibonelo, ikhandlela elikhulu noma ibhodlela le-champagne libukeka lihle phakathi kwe-wreath . Uma ufuna ukwenza i-wreath eyenziwe ngamagatsha wemvelo, lungisa uhlaka oluqinile lwesimbi, lapho uzobeka khona izibopho ngethusi. Okulula futhi okuhlala isikhathi eside kuyoba imisebenzi yezandla zikaKhisimusi, ezenziwa ngezandla zazo ngendlela yezihlahla ezivela emthini wokuKhisimusi wokufakelwa. Bayodinga:
I-thermo-gun noma i-PVA glue;
Ama-napkins emhlophe ephepha;
Umthamo womuthi wokufakelwa;
Izithelo zokufakelwa, amaqabunga nezimbali.
Okokuqala, indandatho evela ephephandabeni isontekile, imininingwane yayo ehlangene ndawonye. Khona-ke uhlaka lwama-napkins luhlanganiswa, futhi kubo - isambatho eluhlaza. Ungayilungisa nge-glue esitokisini noma esivumelwaneni esikhethekile. Khona-ke ungqimba lomuthi kaKhisimusi wokufakelwa uphuthunyiswa, ngemva kwalokho i-wreath ihlotshiswe ngezici ezilungiselelwe, ezihleliwe ne-glue.
Imiklamo yeKhisimusi yokwakha kalula, nje ngokwanele ukuthola isikhathi samahhala futhi ukhethe ukhetho olungcono lokudala.
I-wand omdala enezandla zakhe
I-bat is bird noma isilwane? Izinhlobo zamabulane nezici zazo